i-vertical epulazini yokusanhlamvu yembewu iyathengiswa,i-blender yembewu engcono kakhulu yamantongomane / imbewu
Umshini wokuxuba izinhlamvu wepulazi wepulazi usetshenzisiwe ukuhlanganisa ifilimu ngembewu yokusanhlamvu,imbewu yamantongomane,imbewu kakotini,imbewu kakolweni,imbewu yezimbali, imbewu yasensimini,imbewu yemifino,kanye nenye inqubo yokugoqa ye-granular ukwenza ngcono ikhwalithi yembewu,ukucacisa ngokunembe ngokunembile, okusindisa imbewu, imbewu yokuvimbela izifo, i-anti-pest futhi ithuthukise ukubukeka kwembewu ibe nomphumela obalulekile.I-blender enhle kakhulu yamantongomane futhi imbewu ivame ukusetshenziselwa ukuxuba imbewu yesitshalo ne-fungicide,izibulala-zinambuzane,Umanyolo wezakhi zomzimba,isilawuli sokukhula kwezitshalo,amabala noma izinto zokugcwalisa zomenzeli we-ejenti tan,
Ikhwalithi ephezulu umshini wembewu wokugoqa uhlobo olulodwa lwemishini yasepulazini, umshini wokuxuba imbewu yokusanhlamvu ovundile uvame ukusetshenziselwa ukuxuba imbewu yezitshalo nefungi,izibulala-zinambuzane,Umanyolo wezakhi zomzimba,isilawuli sokukhula kwezitshalo,amabala noma izinto zokugcwalisa zomenzeli we-ejenti.Ibhalwe imbewu ngaphandle,ukuze kufezekiswe imbewu ibe
ukwakheka kwe-spherical orbasickeep yasekuqaleni, ngcono ukumelana, ukumelana nezifo,kusheshisa ukuhluma, ukukhuthaza zibe izithombo,
khuphula umkhiqizo,thuthukisa ikhwalithi yethekhnoloji yembewu. Kuboniswa okungakwazi ukuqinisa ifilimu ngokushesha, futhi akulula ukuwa.
Umshini we-blender wembewu wenziwe ngensimbi ejwayelekile noma insimbi engenacala. Ilungele ukusetshenziswa okubanzi kwezicelo ezifana nokusanhlamvu, ukudla kwezilwane, ufulawa owomile nembewu. Umthamo wemishini yokuxuba imbewu yokusanhlamvu ungenziwa ngokwezifiso zamakhasimende.ungazikhethela uhlobo oluqondile noma uhlobo oluvundlile.Amandla omshini wokuxuba imbewu angaba motor kagesi,injini yephethiloli,injini yedizili njll.
Izici zomxube wezinhlamvu zasepulazini
1. umxube wembewu yasepulazini oyithengiswayo ikakhulukazi owenziwe ngensimbi engenasici, ukumelana nokugqwala.
2. Ukugqoka imbewu kusetshenziswe ezikhungweni zobuchwepheshe zakamuva.
3. Ukusetshenziswa kokugqokwa okude kwembewu yesigubhu ngaphezulu kwembewu ngaphandle kokulimala,ifilimu esheshayo
4. Isigubhu sokuxuba imbewu asiyinsali, umshini wokuhlanza okulula.
Ukucaciswa komxubanisi wembewu yokusanhlamvu
Imodeli I-VTZC500 VTZC1000 VTZC2000
Izilinganiso Zokupheka 97% 97% 97%
Isilinganiso Esaphukile ≤ 0.1% ≤ 0.1% ≤ 0.1%